2022 qurxinta halloween qurxinta halloween ghost ka laadlaadda qurxinta
Nambarka Model: S0335
Magaca alaabta:HalloweenQurxinta Xaflada
Feature:Qaabkani waa mid qurux badan oo dabacsan, waana fudayd oo si sahlan loo maarayn karo.
Habka lacag bixinta:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Qurxinta Xaflada Halloween
Halloween inta lagu guda jiro
Madow/ Orange/ Cadaan
Habkani waa mid qurux badan oo dabacsan, waana mid fudud oo sahlan in la qabto.
L/C,D/A,D/P,T/T,Ururka Galbeedka,Lacagta Gram
Doorashada saxda ah ee qurxinta xafladda mawduuca Halloween
• Alaab weyn oo tayadeedu aad u sarreyso: Dalabkan halloweenka ah ee soo laadlaadda oo laga sameeyay suuf PP ah oo deegaanka ku habboon waana mid waara oo adag in la isticmaalo dhowr sano.Waxay siin doontaa dhammaan martidaada la yaab wanaagsan marka ay soo galaan. Alaabta weyni waxay si fiican ugu shaqayn doontaa baahiyahaaga.
• 3 Stlyes: Spook Pumpkin Doll oo leh koofiyadda Witch, Waxaan u soo bandhignaa saddex midab oo koofiyad ah, Madoow, caddaan iyo madax cad, iyo dhafoof midab leh.
Diyaar u ah in la laadlaadsado oo istaago: Caruusad kasta oo bocorka ah waxay la timaadaa xadhko iswaafaqaya.Hanging Swedish gnome style bocorka waa sahlan tahay in lagu dhejiyo meel kasta oo aad rabto, waxaad u isticmaali kartaa sida qurxinta gudaha oo waxaad ku dhejin kartaa derbiga ama albaabkaaga hore, waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa geedaha geedaha kale ee qurxinta Halloween.Astaamaha lagu miisaamay xagga hoose ee xasilloonida dheeraadka ah, waxay u istaagi karaan si qumman.
1.Competitive Price waxaa la bixin karaa maadaama aan nahay soo saaraha;
2.Low MOQ waa la taageeri karaa;
3.Tayada sare waa la xakameyn karaa;
4.OEM/ODM waa la soo dhawaynayaa maadaama aanu leenahay waax horumarineed oo xirfad leh;
5.Fast Delivery ayaa la bixin karaa;
1. S: Ma bixin kartaa muunad bilaash ah?
J: Haa, waxaanu ku siin karnaa muunad jira bilaash, laakiin xamuulku wuxuu ahaan doonaa dhinacaaga.Muunadda la habeeyey, waxaanu ku dallaci doonaa kharashka muunada;Dalabka meel ka bacdi, waxaanu soo celin doonaa kharashka muunada.
2. S: Waa maxay MOQ-gaagu?
J: Bilowga, waxaan jeclaan lahayn in aan taageerno ganacsiga macaamiisheena tiro yar.Markaa alaabta kaydka ah, 1 gabal waa la aqbalayaa;si loo habeeyay, waxay kuxirantahay alaabta.
3. S: Waa maxay wakhtigaaga dhalmada?
A: Guud ahaan 7-40 maalmood ka dib bixinta, waxay ku xiran tahay alaabta & tirada aad dalbato.
4. S: Waa maxay muddada lacag bixinta.
A: Lacag bixinta ururka reer galbeedka ama Alibaba escrow, T / T 30% dhigaalka ka hor wax soo saarka iyo 70% dheelitirka dalabka bulk ka hor inta aan la dhoofin.
Hore: Cuncun balaastiig ah oo qurux badan tuujin flamingos ee carruurta
Xiga: Qurxinta qalfoofka naxdinta leh ee deegaanka saaxiibtinimada leh ee Xisbiga Halloween
Codka lagu maamulo Duuliyaha Ruuxa ee Guriga Haunted...
Hadiyada fasaxa, Koofiyadda Bakaylaha, Gift Toy, alaabta fasaxa, koofiyadda jiilaalka, Alaabta Cusub,